सफलताको सुत्र सकारात्मक सोच हो: सरिता सिं कायस्थ | Citizen Post News
सरिता सिं कायस्थ ,
उनी एक सफल ब्यवसायी हुन् । छोटो समयमा उनीले राम्रो ब्यवसायीक फड्को मारेकी छन् । काठमाडौंको मुटु न्यूरोडमा जेन्यून कम्यूटर ट्रेडिङ प्रालिकी सञ्चालिका सिंलाई ‘व्यूटी वीथ ब्रेन’ भन्दा पनि फरक नपर्ला । केही समय पहिले भएको मिसेज ब्यूटिफुल नेपाल–२०१८ मा सहभागि मात्र भइनन्, उनले उक्त प्रतियोगितामा फस्ट रनर अप हुँदै अन्य विभिन्न विधामा समेत अवार्ड हात पारिन् । वैवाहिक जिवन, घर, ब्यवसाय र ब्यूटी कन्टेस्टमा मात्र सिमित नभई उनी सामाजिक काममा त्यतिकै सक्रिय हुँदै आएकी छन् । उनै बहुप्रतिभाकी धनि सिंसँग गरिएको छोटो कुराकानी प्रस्तुतः
यहाँ जेन्यून कम्प्यूटर ट्रेडिङ कम्पनीको प्रोपाइटर हुनुहुन्छ, यो कस्तो कम्पनी हो ?
जेन्यून कम्प्यूटर ट्रेडिङ कम्पनी एमएसआई, बेङ्क्यू, लेस्कमार्क, गोल्डकिस्ट, ए–डाटा, टिम–ईलाइट इत्यादी प्रचलित ब्राण्डका कम्प्यूटरहरुको आधिकारिक विक्रेता कम्पनी हो । यो कम्पनी न्यूरोडमा रहेको छ । विशेषगरी डेक्सटप कम्प्यूटर, व्यवसायिक प्रयोगमा बढि प्रयोग हुने जस्तैः एडिटिङ, एनिमेसन, ग्राफिक डिजाइन, गेमिङ आदीसँग सम्वन्धित कम्प्यूटरहरुको खुद्रा तथा होलसेल कम्पनी हो ।
अहिले कस्तो चलिरहेको छ त तपाईको व्यवसाय ?
पहिला निकै राम्रो थियो । अहिले अलि स्लो भएको छ । कारण–बजार धेरै प्रतिस्पर्धात्मक छ । तर हामीले हाम्रा ग्राहकलाई वारेन्टी, ग्यारेन्टी र प्राविधिक सर्पोट राम्ररी गर्दै आएका छौं । जसका कारण हामीले काठमाडौं उपत्यका र बाहिर धेरै भन्दा धेरै ग्राहकको मन जित्न सफल भएका छौं । हामीले विशेषगरी विक्री पछिको सेवालाई विशेष महत्व दिन गरेका छौं । मुलुकभर विभिन्न विक्रेता कम्पनीहरुलाई सर्पोट गर्दै सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा एउटा सफल ब्यवसायीक कम्पनी हुने हाम्रो चाहाना छ ।
केही समय पहिला भएको मिसेज ब्यूटिफुल नेपाल–२०१८ मा भाग लिनु भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा भाग लिने विचार चाहिँ कसरी आयो ?
सानैदेखि सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिने बिचारले मलाई त्यहाँ पुर्याएको हो । मैले मिसेज नेपाल–२०१८ मा भाग लिँए । प्रतियोगीतामा ‘फस्ट रनर अप’ को उपाधि पनि हात पारे । दक्ष ईन्टरनेशनल प्रालिको आयोजनामा भएको उक्त प्रतियोगीता गत पुष २३ गते राष्ट्रिय नाचघरमा भएको थियो । प्रतियोगितामा मैले वेष्ट फिटनेश, फेसबुक च्वाईच र सर्वाधिक लोकप्रिय अवार्ड पनि हात पारे ।
ब्यवसायी मान्छे, के तपाईलाई उक्त प्रतियोगिता आफु जित्छु वा केही न केही अवार्ड हाजिल गर्छु भन्ने विश्वास थियो त ?
म आफ्नो कामप्रति निकै प्रतिबद्ध छु । म जे काम गर्छु त्यो पुरै लगन, मेहनत र संवेदनशील भएर मनभित्रैबाट गर्छु । त्यहि विश्वासले मलाई यहाँ पुर्याएको हो जस्तो लाग्छ । मेरो एउटा बानी छ–जुनसुकै कुरालाई पनि सकारात्मक सोचबाट हेर्ने । आफ्नो नजिकका साथीभाइलाई पनि सकारात्मक सोचबाट अगाडि बढ्न सुझाउँछु । सफलताको प्रमुख सुत्र नै सकारात्मक सोच हो ।
अनि तपाई त विभिन्न सामाजिक काममा पनि आवद्ध हुनुहुन्छ नि, हैन ?
हो, मलाई सामाजिक कार्य गर्न औधी मन पर्छ । सानैदेखि यहि भावना भएकाले होला विभिन्न सामाजिक काममा सहभागिता जनाउँदै आएको छु । म लायन्स क्लब सम्वृद्धिलगायत आधा दर्जन सामाजिक संघ–संस्थामा आवद्ध छु । मलाई गरिब तथा टुहुरा बालबालिका र अपांङ, बृद्धबृद्धाको सेवा गर्न एकदमै मन पर्छ । भविश्यमा सोही काम गर्नका लागि एउटा संस्था नै दर्ता गरेर अगाडि बढ्ने सोच बनाएको छु ।
तपाई सफलताको श्रेय कसलाई दिन चाहानुहुन्छ ?
एउटा सफल ब्यवसायी भएता पनि म आफुले भोगेको संघर्षपूर्ण अतित भुल्न सक्दिन । प्रतिक्षाको फल जहिले मिठो हुन्छ, त्यसै भनिएको होइन । र, मेरो सफलताका श्रेय पनि मलाई दुःखमा साथ दिने मेरा अभिभावक, साथीभाई, सहकर्मी र आफन्तलाई दिन चाहान्छु ।